Ukuya ku IYurophu liphupha zizaliseke ezininzi. Kwaye xa sele nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba babe nethuba lokuba uphawu le ndawo ingabikho luhlu yakho emele ubone zonke iindawo kakhulu eYurophu, uya kufuna ukwenza amava kangangoko ekhumbulekayo kangangoko kunokwenzeka. Ke sinikele ingqalelo kuQeqesha Ukuhamba eYurophu kunye neThalys.
Zonke iiklasi ezifundisa WiFi internet eyayifakwe, ukufikelela kwi-bar buffet, kunye nesokethi yakho yamandla wokufaka kwizixhobo zakho.
Yinto Kunyanzelekile ukuba wenze ubhukisho ngololiwe ukuba ufuna ukuhamba phezu koololiwe Thalys. Oololiwe bakwaThalys yimfuno ephezulu ke qiniseka ukuba ubhukisha itikiti lakho lololiwe kangangoko kunokwenzeka kwangaphambili.
Ukwenza ukubhukisha ukuHamba ngeTreyini eYurophu kunye neThalys, Incwadi A Train Online. Sisebenza kunye Thalys ukuqinisekisa akuyi kuhlawuliswa nayiphi na imirhumo ukubhukisha kwaye ufumane amazinga kangangoko.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-europe-thalys%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#traveleurope europetravel trainjourney Tranride oololiwe traintip tips uloliwe train Travel tips zokuhamba train uhambo ngololiwe Travel zoorbelgium travelfrance travelgermany imvucurand travelnetherlands traveltips